Blackberry, tinyere keyboard nkịtị, ga-alaghachi na 2021 | Gam akporosis
Ihe akụkọ ifo mbinye aka Blackberry, na kpochapụwo nkịtị ahụ Qwerty kiiboodu, bụ na-alaghachi n'ahịa. Ọ bụ ezie na mmiri zokwara ọtụtụ ebe ọ bụ na Blackberry na-achịkwa ahịa ọkachamara maka ngwaọrụ mkpanaka. Nzọụkwụ gị ka ga-ehichapụ kpamkpam na ọzọ e nwere mkpebi siri ike na ịlaghachi na ahịa maka 2021 a. Nye ndị na-eche ma a keyboard ahụ nwere ọnọdụ n'etiti onyinye dị iche iche dị ugbu a Na ekwentị mkpanaaka, azịza ya yiri ka ọ bụ ee n'eziokwu.
Tupu iPhones, Galaxy, Xiaomi na ngwaọrụ ndị ọzọ nke oge a weghaara ahịa, dị ike nke ukwuu Nokia bụ eze nwanyị a na-apụghị ịgbagha agbagha nke ahịa telephony ụwa. Blackberry bụ nnukwu ngwụcha na-aga n'ihu na mgbakwunye nke keyboard zuru ezu. Na-enweghị gam akporo n'etiti, ma ọ bụ iOS, ekwentị ndị a nwere ike izute mkpa niile nke ndị ọrụ ọkachamara na ndị ọkachamara.
BlackBerry ga-anwa ọzọ na 2021
Oge nkea ugbua mbinye aka akara ngosi ga-abata na njikọ ọhụrụ na a priori na-ekwe nkwa ọtụtụ. Ịga n'ihu n'aka onye na-emepụta ekwentị na ihe mejupụtara ya Foxcom, ga-ahụ maka "ịkpọlite" BlackBerry. N'oge a, na mgbakwunye na nwere mythical stampụ dị ka keyboard ya Qwerty zuru ezu, kwa ga-enwe teknụzụ kachasị ọhụrụ, dịka a Njikọ 5G nke ahụ ga-eme ka ha tokwuo ọrụ.
Ọgọstụ gara aga, ikike TCL nwụrụ iji na-erigbu ọnụ n'okpuru BlackBerry ika. N'ime afọ 4, kemgbe 2016, TCL enwela ike iji akara BlackBerry eme ihe n'enweghị nnukwu ihe ịga nke ọma. Anyị mechara nwee ike ịhụ ka ọdụ ụlọ ọrụ ahụ, dị ka BlackBerry Igodo 2 na Igodo 2 LE. Ekwentị abụọ nwere Ahụigodo QWERTY akara ụlọ, ma gịnị ha rụrụ ọrụ n'okpuru sistemụ arụmọrụ gam akporo.
N'oge anyị enweghị ọtụtụ ozi gbasara ya. Ma ọ bụ eziokwu nzọ nke OnwardMobility yana Foxcom ka BlackBerry nwee ike ịlaghachi inwe niche na ahia. Ha ga-eji akara kwekọrọ na ha bịa nkịtị kiiboodu, na ha ga-enwe ihe niile ha chọrọ iji nwee ike ịlụ ọgụ na nhọrọ ndị ọzọ. You na-ahụ onwe gị ka ị na-eji BlackBerry afọ iri na isii gachara?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Blackberry, tinyere keyboard nkịtị, ga-alaghachi na 2021